अरू डिआईजी भन्दा २ वर्ष अघि सेवा प्रवेश गरेका सिपी गौतम एआईजी बन्दै !
nishannews बैसाख ४, 2079
सशस्त्र प्रहरीमा रिक्त अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)मा बढुवा हुन ४ जना डीआईजीले आवेदन दिएका छन् । चैत ३० मा बढुवा समितिका सदस्य–सचिव आईजीपी पुष्पराम केसीले प्रतिस्पर्धीहरुलाई ३ दिने सूचना जारी गरेका थिए । सशस्त्र प्रहरीमा एआईजीको १ सिट रिक्त छ । सो सिटमा बढुवा हुन ‘योग्य छौं’ भनेर डीआईजीहरू राजु ...
यस्तो चरा, जो प्यासले तड्पिँदा समेत प...
माघ २९, 2078 काठमाडौं । विश्वमा विभिन्न प्रजातिका चराहरू छन्, त्यसमा पनि धेरै प्रजातिहरू अत्यन्त दुर्लभ छन् । यीमध्ये धेरै चराहरू यस्ता छन् जो आफ्नो विशेषताका लागि विश्वभर चर्चित छन् । पृथ्वीमा रहेका हरेक प्राणीलाई बाँच्नका लागि पानी ध...
टिकटकमा पपुलर असाध्यै बोल्ड नेपालकी भ...
पुष ७, 2078 काठमाडौं । प्रियंका ढकाल अहिले पछिल्लो सर्वाधिक चर्चामा रहेको भिडियो प्लाटफर्म टिकटकमा एकदम नै भाइरल छिन् । उनको लोकप्रियता बढ्दै गएको छ । आकर्षक जीउडाललाई कलात्मक र बोल्ड ढंगले प्रस्तुत गर्ने भएकाले उनका भिडियोहरु खुबै च...
मन्त्रीले हेमा मालिनीको गाला सडकसँग त...
पुष ६, 2078 काठमाडौं । भारतको महाराष्ट्रका जल आपूर्ति तथा स्वच्छता मन्त्री गुलबाराव पाटिलले सडकको तुलनामा नायिका तथा भाजपा सांसद हेमा मालिनीको गालासँग गरेका छन् । वास्तवमा आइतबार एक राजनीतिक र्यालीमा उनी समावेश भएका थिए । गुलाबरावले ...
सानै उमेरमा अश्लील सामग्री हेर्दा ‘दु...
पुष १, 2078 काठमाडौं । गायिका बिली आइलिशले ११ वर्षको उमेरदेखि “दुर्व्यवहारपूर्ण” पोर्न सामग्रीसँग साक्षात्कार हुँदा आफूले भोगेको दुरवस्थाबारे बोलेकी छन्। सिरिअसएक्सएम रेडिओमा बोल्दै १९ वर्षीया गायिकाले अश्लील सामग्रीबारे सम्झिँदा आफू ...
जब पहिलो पटक डेट गर्न आएका ब्वाइफ्रेण...
मंसिर २६, 2078 काठमाडौं । डेटिङको बेला एक प्रेमिकासँग कुराकानीका क्रममा अनौठो घटना घटेको छ । कुराकानी गरिरहेका प्रेमी–प्रेमिका पहिले अनलाइनमा भेट भएका थिए । पछि उनीहरु डेटिङमा गए तर उक्त समयमा प्रेमीका अवस्था देखेर प्रेमिका तनावमा परिन् ...
पत्नीको गुनासोपछि श्रीमानले बनाए ३ सय...
आश्विन २६, 2078 काठमाडौं । पत्नीले एउटै दृश्यलाई फरक–फरक कोणबाट हेर्ने इच्छा गरेपछि एक श्रीमानले ३ सय ६० डिग्री घुम्ने घर बनाएका छन् । यो अनौठो घर उत्तरी बोस्नियाको सर्बेक शहर नजिकैको एक मैदानमा छ । ‘हामीले पटक–पटक घर पुनर्निर्माण गरिसके...
भियाग्राको कारण श्रीमती गर्भवती नभएपछ...
आश्विन १८, 2078 काठमाडौं । शारीरिक सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनका लागि भियाग्राजस्ता औषधिको प्रयोग घातक सावित हुनसक्छ । भियाग्राका कारण विभिन्न प्रकारका शारीरिक समस्याहरु आउने गरेका थुप्रै उदाहरण भेटिएका चिकित्सकहरु बताउँछन् । यसैबीच, एक व्यक्...
महिलाले पिसाव फेरेको भिडियो पोर्न साइ...
आश्विन १६, 2078 बार्सिलोना । स्पेनमा महिला अधिकारवादी समूहका तर्फबाट दायर भएको एउटा मुद्दा त्यहाँको अदालतले खारेज गरिदिएको छ । महिला सार्वजनिक स्थलमा सामूहिक रूपमा पिसाव फेर्न जाँदा गोप्य ढंगले खिचिएको तस्बिर र भिडियो दुरूपयोग भएपछि अधिक...
छिमेकीले आफ्नो श्रीमानलाई उत्तेजित पा...
भाद्र २८, 2078 काठमाडौं । मेक्सिकोस्थित क्विनटाना रोका प्रहरीले एउटा निकै अचम्मको उजुरी पाएका छन् । त्यहाँकी एक महिलाले आफ्नी २३ वर्षीया छिमेकीमाथि देखिने गरी भित्री वस्त्र सुकाएकोमा आपत्ति जताउँदै उजुरी नै दर्ता गरेकी छिन् । उनको अनुसार...
प्रेमीको अचम्मको यौन स्थिति, महिला भइ...
भाद्र ३, 2078 काठमाडौं । प्रेमलाई नजिकबाट बुझ्नका लागि कहिलेकाँही जोडी लिभ इनमा बस्ने निर्णय गर्छन् । सँगै बसेपछि पार्टनरको राम्रो नराम्रो बानीबारे पनि थाहा हुन्छ । लिभ इनमा बस्ने एक महिलाले आफ्ना प्रेमीको यस्तै अचम्मको यौन स्थितिबारे ...
सेक्स म्यूजियममा खिचेको तस्विर पोस्ट ...
श्रावण २७, 2078 काठमाडौं । एक इस्ट्राग्राम मोडलले सेक्स म्यूजियममा लिइएको आफ्नो फोटो सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दा ठूलो मूल्य चुकाउनु परेको छ । नेदरल्याण्डको एम्स्टर्डममा रहेको उक्त सेक्स म्यूजियम लिइएको उनको उक्त फोटोका लागि उनको देश टर्...
चीनका युवती अत्यधिक जोखिम मौल्दै किन ...
श्रावण ३, 2078 काठमाडौं । आफ्ना थुप्रै साथी झैं २३ वर्षकी रक्सिन हरेक दिन आफ्नो सोसल मिडिया फिडलाई स्क्रोल गर्छिन् तर उनी अरुभन्दा भिन्न केही विशेष कुरा त्यहाँ खोज्छिन् । उनी कस्मेटिक सर्जरीबारे अपडेट हुन चाहन्छिन् । हरेक स्क्रोलसँगै उन...
बच्चाहरुले माटो खान किन इच्छा गर्छन् ...
असार २७, 2078 काठमाडौं । केही बच्चा र गर्भवती महिलामा माटो, चक वा रंग जस्ता अनौठो चीज खाने शौख हुन्छ । यसलाई पीका ईटिंग डिसर्डर भनिन्छ । शरीरमा केही चीजको कमीका कारण बच्चामा अनौठो चीज खाने बानी हुन्छ । किन हुन्छ माटो खाने इच्छा ?माटो, ...
यस्तो थिए पहिलेका मानिसले प्रयोग गर्न...
असार २०, 2078 काठमाडौं । यौन खेलौनाको नाम लिने बित्तिकै मानिसहरु लजाउने गर्दछन् । कुनै अर्कै संसारका बारेमा कुरा हुँदैछ जसरी मानिसको फरक व्यवहार हुने गर्दछन् । यौन सुख दिने यी खेलौना अर्थात सेक्स टोइज हाम्रा पूर्खाले हजारौं वर्षदेखि नै ...
← अघिल्लो 1234567 पछिल्लो →
धनकुटामा शुरु एमालेको ज्यादत्ति, गठबन्धनका उम्मेदवारलाई भोट हान्दा यसरी पिटिइन् बच्चिमाया
धनकुटा । निर्वाचनमा हार जित हुनु स्वभाविकै हो । तर, धनकुटाको सहिदभुमी गाउँपालिकामा गठबन्धनलाई मत ...
धनकुटामा कांग्रेसको चुनावी कमाण्डर एउटा, चर्चा कमाउने अर्कै
धनकुटामा एमालेलाई शुरुवाती अग्रता दिनेश राई दोस्रो पटक आमने सामने
इटहरीका मेयर चौधरीले भने, गठबन्धनको प्रतिकार गर्दा घाइते भए जहाज चार्टर्ड गरेर उपचार गर्छु
एमाले कार्यकर्ताद्धारा चितवनमा कांग्रेस नेता अनिल परियारको छुरा प्रहार गरी हत्या
‘एक हारले धनकुटामा हाम्रो सर्वश्व गुमेको छैन, फेरि समय आउँछ’
धनकुटाको सहिदभुमीमा एमालेको दादागिरी, फर्जी मत खसाउन खोज्दा मतदान स्थगित
भरतपुरको प्रारम्भिक मतपरिणाममा एमालेका मेयर पदका उम्मेवार विजय सुवेदीको अग्रता कायम
आज २०७९ साल जेठ १२ गते बिहीबार, यसरी चम्किँदै छ तपाईको भाग्य (राशीफल)
१०१ स्थानीय तहको मत परिणाम सार्वजनिक,कसले लियो अग्रता ?
विजय सन्तोषी राई
कुमार पन्त ‘शिशिर’
सलिम अन्सारी (प्युठान)
जुना वि. क.
किरन थापा (डडेलधुरा)
निशानदेवी मिडिया प्रालि
सुचना विभाग दर्ता नं. ६७५/०७४/०७५
सम्पर्क नं. ९८५१०७७७६१
© 2022 निशानदेवी मिडिया प्रालि